होबार्टमा छायो दशैँ धमका ! « MNTVONLINE.COM
होबार्ट, अष्ट्रेलिया । ग्लोबल मार्क एजुकेशन एण्ड भिजा सर्भिसेजको मुख्य प्रयोजनमा अक्टोबर ९ तारिखका दिन होटल ग्राण्ड चान्सेलोरमा हुन गइरहेको छ । युवाहरुद्धारा संगठित विनर सर्कल तास्मानिले आयोजना गर्न लागेको दशौ विषेश कार्यक्रम दशैँ धमका म्युजिकल नाईट को चर्चा अहिले तास्मानिया भरी छायको छ ।
यतिबेला अष्ट्रेलियाका अन्य राज्यहरुमा कोरोना महामारीले बन्द अवस्थामा रहँदा होबार्टमा भने धमकाले दशैँको माहोल चर्किएको छ । होबार्टका हरेक ग्रोसरी स्टोरदेखि एवं अन्य नेपाली तथा भारतीयद्धारा सञ्चालित व्यवसायमा धमका कार्यक्रम पोष्टर निमन्त्रण देख्न पाइन्छ ।
यस कार्यक्रमको मुख्य आकर्षक भनेको लाइभ म्युजिक अनि डिजे रहेको छ । नेपालका चर्चित गायक बादल पर्साईँ चर्चित व्यान्ड अर्थसहित करिब १७ जना स्थाननिय कलाकारहरुको भब्य टोली यस कार्यक्रममा प्रस्तुति दिनेछ ।
अष्ट्रेलियामा लामो समयपछि यसरी भव्य कन्सर्ट हुँदैछ । हामी निकै नै हर्षित छौँ, विनर टिमको साथ र सबैको मायाले काम गर्न थप उर्जा मिलेको छ । यस कार्यक्रमबाट हामी तास्मानियावासी नेपालीहरुमा दशैँको मेलाको झल्को मेटाउने छौँ । विनर सर्कल तास्मानियाका एडमिन सनम परियार बताउँछन् ।
ग्लोबल मार्क एजुकेशन एण्ड भिजा सर्भिसेजका निर्देशक अरुण चित्रकारले भने, युवा संस्कार र संस्कृतिको पर्वद्धनका लागि हामी सदैव तत्पर छौँ । युवा साथिहरुको जोशले हामीहरुलाई भव्य र सभ्य रुपमा कार्यक्रम सफल पार्नेछौँ ।
ओलीको प्रश्‍न: परमादेश जारी गर्ने पाँचै जनाले राजीनामा दिनु उपयुक्त होइन र ?
काठमाडौका यी आठ स्थानीय तहमा आजदेखि एस्ट्राजेनिका खोपको दोस्रो मात्रा लगाइँदै
मन्त्रिपरिषद् बैठक सकियो, के-के भए निर्णय ?
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन चाँडै घोषणा हुन्छ: प्रधानमन्त्री
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक आज बस्दै, १४ न्यायाधीश सहभागी नहुने